सेयर बजारमा पहिरो जाने यी हुन् ४ मुख्य कारण - Arthatantra.com
सेयर बजारमा पहिरो जाने यी हुन् ४ मुख्य कारण
लगानीकर्ताले कहिलेसम्म नियामक निकाय र राज्यको मुख ताक्ने ?
काठमाडौं । अहिलेको सेयर बजारलाई चार वटा विषयले निकै प्रभाव पारेको देखिएको छ । जानकारहरुको अनुसार अहिले बजारलाई प्रभाव पार्नेमा ब्याजदर, वातावरण, विकल्प र बुझाईका कारण बजारमा गिरावट देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाए भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा देखिने गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले असोज १ गतेदेखी लागू हुनेगरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।
बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । जसको असर बजारमा परेको देखिएको छ । बजार घट्नुका विभिन्न करण मध्ये ब्याजदर प्रमुख भएको जानकारहरुको भनाई छ ।
सेयर बजार बढ्न वा घट्नको लागि वातावरण पनि प्रमुख हुने गर्दछ । सेयर बजारलाई नियामक निकायले गर्ने काम, सरकारको नीति नियम, नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले दिने अभिव्यक्तिले पनि बजारलाई प्रभाव पर्ने गरेको छ । गत साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको अभिव्यक्तिको कारण पनि बजारमा असर परेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आइक्यानको कार्यक्रममा सेयर बजार बजारमा हावा भरिएको र यसको हावा खुस्क्यो भने के हुन्छ ? भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । त्यसको असर पनि बजारमा देखिएको बताइन थालेको छ ।
मन्त्री शर्माको उक्त अभिव्यक्तिले उहाँ र सरकारको नै सेयर बजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने बुझाईले पनि प्रभाव पारेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।
त्यती मात्रै नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था कहारण पनि बजारमा पहिरो जान थालेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितो कर्जाको सिमामा गरेको नयाँ व्यवस्थाले पनि बजारलाई निकै प्यानिक बनाएको लगानीकर्ताको भनाई छ । अहिलेको यस्तो वातावरणका कारण बजारलाई प्यानिक बन्न मद्दत पुगेको एक अग्रज लगानीकर्ताको भनाई छ ।
कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दी क्रमश कम हुँदै गएको र लगानीको विकल्पहरु बढ्दै गएको, बजार चलायमान भएको, उद्योग धन्दा चल्न थालेका छन् । त्यसको असर पनि बजारमा देखिन थालेको छ । पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाहहुँदा बढी सेयर धितो कर्जामा जाने गरेको र अहिले त्यो कर्जा अन्य क्षेत्रमा पनि जान थालेको, लगानीको विकल्प बढेको असर बजारमा देखिएको एक बैंकर्सको भनाई छ ।
अहिले सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताको बुझाई कमजोर बन्दै जानु, लगानीको निर्णय क्षमता कम हुँदै जानाले पनि बजारमा असर देखिएको जानकाहरुको तर्क छ । बैंकको ब्याजदर तत्काल परिवर्तन हुने सम्भवना नरहेको बैंकर्सहरुको भनाई छ । बजारको विकासको लागि नियामक निकाय तथा राज्यपक्षले नै सकारात्मक पहल आवश्यक रहेको र त्यसले आम लगानीकर्ताको बुझाईमा प्रभाव पार्न आवश्यक रहेको जानकार लगानीकर्ताहरुको भनाई छ ।
वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १३:२८ मा प्रकाशित
अघिल्लाे रुरु जलविद्युतको दुई आर्थिक वर्षको लाभांश सुरक्षित गर्ने भोलि अन्तिम दिन, बोनस र नगद कति ?
पछिल्लाे मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको सेयर मूल्यमा उछाल, प्रतिकित्ता एक हजार नाघ्यो